dhiri: isina kuvhurwa samsung galaxy s7 kumucheto pakutengeswa kwe $ 475 chete paibay
Kuru Nhau & Ongororo Deal: Yakavhurwa Samsung Galaxy S7 pamupendero uri kutengeswa ne $ 475 chete paBay
Deal: Yakavhurwa Samsung Galaxy S7 pamupendero uri kutengeswa ne $ 475 chete paBay
Zvino Samsung zvayakagadzira mireza yayo mitsva, iyo Galaxy S8 uye S8 + zviripo pamusika, isu tinogona pakupedzisira kuwana zvibvumirano zvine musoro pane mamodheru apfuura, iyo Galaxy S7 uye Galaxy S7 kumucheto.
Kunge kukwidziridzwa kuri kuitika paBay, iyo inopa iyo Samsung Galaxy S7 kumucheto kwe $ 475 chete. Iyo Galaxy S7 kumucheto inowanikwa kuti utenge muUnited States ne $ 600, asi iwe & apos; muchange muchichengetedza $ 125 kana muchizviwana kubva eBay.
Ramba uchifunga kunyange zvakadaro kuti eBay mutengesi ari kutengesa iyo yakavhurwa Samsung Galaxy S7 kumucheto Duos, iyo inongoshanda chete AT & T uye T-Mobile mabhendi . Izvo & maapos; s zvakare kukosha kuziva kuti iwe & apos; uchazokwanisa kusarudza kubva kungave nhema kana goridhe mavara.
Uyezve, iyo Galaxy S7 kumucheto Duos modhi inoenderana neiyi yekusimudzira yekupa mapakeji 32GB yemukati ndangariro, asi iwe unogona zvakare kusarudza iyo 128GB musiyano kana iwe usinga fung & mutengo wakakwira kwazvo ($ 580).
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, iyo mafoni anotakura muUnited States chete uye ichasvika kwauri mumazuva mana, sekutaura kwemutengesi paBay.
Samsung Galaxy S7 kumucheto
Kunobva: eBay ( 32GB modhi , 128GB modhi )
nei iphone yakakurumbira
Maitiro ekutumira mafoto uye mavhidhiyo kubva ku iPhone kuenda kune Android foni
T-Mobile kuvhara Metro PCS 'CDMA network muLas Vegas neNew England
Deal: Yakavhurwa Samsung Galaxy S7 uye S7 pamupendero izvo zvino zvakachipa paGood Buy